Android Beam apụọla na gam akporo Q | Androidsis
Gam akporo Doo ga-apụ n'anya na gam akporo Q
Edere Ferreno | | Ngwa gam akporo, Noticias
NFC bụ ihe enwetala ọtụtụ ọnụnọ na gam akporo, n'agbanyeghị na ọ nọ na sistemụ arụmọrụ ihe dị ka afọ asaa. Ihe a na -ejikarị eme taa bụ ịkwụ ụgwọ ekwentị. Agbanyeghị na enwere ike ịnye ya ojiji ndị ọzọ, dị ka izipu faịlụ n'etiti ekwentị. A maara atụmatụ a dị ka Android Beam, nke furu efu ụfọdụ ọnụnọ ya ka oge na -aga. N'ezie, ọnwa ole na ole gara aga ị hụla ihe ọdịnihu ya ga -abụ.
Google kwuputara na ha kwụsịrị ịrụ ọrụ na gam akporo Beam. Otu akụkọ nke mere ka o doo anya na o nweghị oge fọdụụrụ. Ihe a na -akwado ugbu a na beta ọhụrụ nke Android Q. Kemgbe njirimara a n'ikpeazụ na -apụ n'anya na sistemụ arụmọrụ. Naanị ị na -eji ekwentị eziga faịlụ na NFC.
Ọ bụ ihe enwere ike ịhụ ka ọ na -abịa, na -eche na ahapụlarị mmepe nke Android Beam. Mana ọ ka bụ akụkọ na -eju ọtụtụ ndị anya. Gụnyere na izipu faịlụ site na NFC agaghị abụzi ihe ga -ekwe omume na gam akporo Q. Mgbanwe dị ukwuu na sistemụ arụmọrụ.
Na beta ọhụrụ ọ nweghị akara ya. Maka nke a, ụfọdụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi akpọtụrụla Google iji gosi ma nke a bụ ya. Ihe ụlọ ọrụ n'onwe ya mechara gosi. Ka ọ were Android Pie bụ ụdị ikpeazụ nke ndakọrịta a dị.
Ọ bụ ezie na ọ bụ mgbanwe ọtụtụ mmadụ agaghị enwe ekele, buru n'uche na Android Beam bụ ihe a na -anaghị ejikarị ekwentị eme. Ọtụtụ ndị ọrụ nwere ụzọ ndị ọzọ nke izipu faịlụ n'etiti ekwentị. Yabụ njirimara a bụ ihe tụfuru ọtụtụ ala na enweghịzi uche idobe ya.
Android Q na -ahapụ anyị mgbanwe ụbọchị ndị a, ka a na -achọpụta ọtụtụ ihe ekele maka beta ọhụrụ a nke sistemụ arụmọrụ. Yabụ anyị ga -ahụ ihe akụkọ ndị ọzọ na -abịakwute anyị n'ụbọchị ndị na -abịa. Kedu ihe ị chere gbasara ọdịda Android Beam?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Gam akporo Doo ga-apụ n'anya na gam akporo Q
Ọ gwụla ma ị mehiere, ọ rụkwara ọrụ izipu ọnọdụ maapụ ma ọ bụ ọbụlagodi na ị na -eji ngwa, na enyi gị chọrọ ya, naanị site na ịbịaru ekwentị nso, ọ ga -akpọga ya n'ụlọ ahịa egwuregwu ka ibudata ya ozugbo. Maka m ma ọ bụrụ na ha ewepụ ọrụ ndị a ọ bụ nnukwu mfu.
Edere Ferreno dijo
Ee, ị nwekwara ike ịkekọrịta ọnọdụ na Google Maps, ma ọ bụ kesaa vidiyo YouTube. Mana ka oge na -aga, ụzọ ndị ọzọ esi ekerịta nke a apụtala, ha ahapụla Android Beam n'akụkụ. N'akụkụ ya ọ bụ ihe ezi uche dị na ya kwụsị ịrụ ọrụ.
Zaghachi Eder Ferreño
Gboard ga-eme ka ọdịdị nke gam akporo Q na-asọpụrụ isiokwu isiokwu
A gacha RPG na Revue Starlight RE LIVE nke na-agbaso akụkọ banyere manga